Trader's Moon EA သုံးသပ်ချက် - အကောင်းဆုံး Forex EA's | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာကုန်သည်၏လွန်း EAကုန်သည်၏မွန်း EA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် ကုန်သည်၏လွန်း EA 1
စျေးနှုန်း: $ 269 (1 သက်တမ်းတစ်လျှောက်လိုင်စင်၊ အခမဲ့မွမ်းမံမှုများ & 24 /7ရင်းရင်းနှီးနှီးထောက်ခံမှု)
ငွေကြေးစွမ်း: AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURCAD, EURCHF, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, NZDCAD, NZDUSD နှင့် USDSGD
- ကုန်သည်၏ Sun EA: 1 တစ်သက်တာလိုင်စင်၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲ၊ အခမဲ့မွမ်းမံမှုများ & 24 /7ဖော်ရွေပံ့ပိုးမှု၊ ပုံမှန်စျေးနှုန်း - $ 269
- Trader's Moon EA: 1 တစ်သက်တာလိုင်စင်၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲ၊ အခမဲ့မွမ်းမံမှုများ & 24 /7ဖော်ရွေပံ့ပိုးမှု၊ ပုံမှန်စျေးနှုန်း - $ 269
- အထူးကမ်းလှမ်းမှု - 1 ၏ Trader Sun & Trader Moon EA's လိုင်စင်၊ အခမဲ့အပ်ဒိတ်များနှင့်ပံ့ပိုးမှု၊ လျှော့စျေး: $ 405
ဤဖြည့်စွက်ထားသော Forex စက်ရုပ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဖတ်ပါ ကုန်သည်၏ Sun EA သုံးသပ်ချက်
Trader's Moon EA သုံးသပ်ချက် - Metatrader4အတွက်အစွမ်းထက်သော Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသူ
ကုန်သည်၏မွန်း EA အလွန်အစွမ်းထက်နှင့်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖြစ်ပါသည် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး အရင်ကဆိုရင်နှင့်အပြစ်တွေနှစ်ဦးစလုံးသည်။ ဒီ developer များ Forex စက်ရုပ် ဒီကုန်သွယ် algorithm ကိုဖန်တီးနိုင်စေဖို့, နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြသည်။
ကုန်သည်၏မွန်း EA သင့်ရဲ့ Metatrader4(MT4) ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းနေရာ, မန်နေဂျင်းနှင့်ပိတ်ပွဲအရောင်းအပေါ်အပြေး, အာရုံကြောကွန်ရက်များနှင့်နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုထည့်သွင်း။ အဆိုပါ developer များဟာတည်ဆောက်ရန်အများအပြားဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းကုန်သွယ်ညွှန်းကိန်းများနှင့် filter များလျှောက်ထား ကုန်သည်၏မွန်း EA လည်းအများဆုံးရလဒ်အဘို့, ဈေးကွက်ထဲမှာဖွင့်ဖို့ကြိုတင်ဆော့ဖ်ဝဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
FX စက်ရုပ်တွင်အမြင့်ဆုံးနိုင်သည့်နှုန်းရှိသည် AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURCAD, EURCHF, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, NZDCAD, NZDUSD နှင့် USDSGD တစ်ချိန်တည်းမှာငွေကြေးစွမ်း။
ဒါကထူးခြားတဲ့ ကုန်သည်၏မွန်း EA သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူကိုကုန်သည်တွေအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်!
၏အသုံးပြုမှုကို Make ကုန်သည်၏မွန်း EA နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် ကုန်သည်၏မွန်း EA အားလုံးအကြောင်းပါ။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက် Forex နည်းဗျူဟာဖြစ်ပြီးသင့်အားအနားယူရန်နှင့် FX Trading Robot ၏လှည့်စားမှုကိုကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ သတ်မှတ်ချက်များကိုသင့်အားပေးပြီးနောက်၊ သင်လုပ်ရန်ငွေပေးချေမှုအားလုံးကိုစက်ရုပ်သည်လွှဲပြောင်းယူသည်။ ၎င်းသည်သင်၏စွမ်းအင်ကိုအခြားအရေးကြီးသည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်စဉ်ထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေအတွက်အမတူဘဲ ကုန်သည်၏မွန်း EA စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကင်းမဲ့ပြီးလုံးဝတွက်ချက်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး spur-of-the- ယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မယူပါလိမ့်မယ်။
Trader's Moon EA - ကုန်သွယ်ရေးယုတ္တိဗေဒ၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
ကုန်သည်၏မွန်း EA တစ်ဦးအပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖြစ်ပါသည် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး သောကိုအသုံးပြုသည် Martingale မူအရပေမယ့်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များစွာနှင့်အတူ။ EA ၏အရောင်းအ ၀ ယ် algorithm ကို MetaQuotes Language4တွင်အတွေ့အကြုံရှိသောပရိုဂရမ်မာများကရေးသားခဲ့သည်။
ဤ FX စက်ရုပ်ကို“ Metatrader4အတွက် Tick Data Suite” ဆော့ဖ်ဝဲလ်အထုပ်ကိုအသုံးပြုပြီးရေပေါ်ပြန့်နှံ့သွားခြင်းနှင့် slippage ၏ခြင်း simulation ကိုအသုံးပြုသည်။ ဆွစ်ဇာလန်ပွဲစား Dukascopy မှ 99% အရည်အသွေးနှင့်စမ်းသပ်မှုများကိုကိုးကားချက်များပြခဲ့သည်။
EA သည်အချက်ပြဇယားများ (Bollinger Band၊ Commodity Channel Index နှင့်စသည်တို့) ကို အသုံးပြု၍ အချက်ပြရှာဖွေခြင်းနှင့်ဖယောင်းတိုင်ပုံစံများကို အခြေခံ၍ ရာထူးများကိုဖွင့်သည်။
ကုန်သည်၏ Moon Forex စက်ရုပ် ပွင့်လင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်အရေအတွက်၊ အများဆုံးဆုတ်ခွာခြင်း၊ အားလုံးအတွက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်သတင်းနောက်ခံရှိစစ်ထုတ်ခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်စျေးသို့ ၀ င်ခွင့်ကိုအချိန်တိုအတွင်းပိတ်ဆို့ရန်နှင့်အကောင့်တစ်ခုလုံး၏အကြွေးပမာဏကိုလျှော့ချရန်ခွင့်ပြုသည်။
EA သည်နေ့စဉ်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သော်လည်းအမှာစာဖွင့်ခြင်း၏အဓိကအချက်မှာအာရှအစည်းအဝေးအတွင်းညတွင်သာဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုသာအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများမှာ entry ကိုအာမခံပါသည်။
ကုန်သည်၏မွန်း EA အပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ် AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURCAD, EURCHF, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, NZDCAD, NZDUSD နှင့် USDSGD ငွေကြေးစွမ်း။
ကျနော်တို့အလွန်အမင်းယင်းနှင့်အတူကုန်သွယ်မှုအကြံပြု safe mode 50% အန္တရာယ်ကိုအသုံးပြုခြင်း (သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော) ။ ၎င်းသည် 5000 အတွက်ဒေါ်လာ 0.01 လိုအပ်သည်။
နှင့်အတူကုန်သွယ်၏အမှု၌ ပျမ်းမျှ mode ကို အကြံပြုထားသည့်အန္တရာယ်မှာ 35% (သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 3000 အတွက် $ 0.01 လိုအပ်သည်။
နှင့်ကုန်သွယ် ရန်လို mode ကို သင်သည် 25% အန္တရာယ် (သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော) ကိုသတ်မှတ်သင့်သည်။ 1500 အတွက်ဒေါ်လာ 0.01 သာလိုအပ်သည်။
Trader's Moon EA - သင်အောင်မြင်ရန်တစ်ခုတည်းသော Forex Trading Tool တစ်ခု
Trader's Moon ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး အားလုံး Metatrader4(MT4) ပွဲစားများနှင့်အတူအဖြစ် ECN-type အမျိုးအစားအလို့ငှာပွညျ့စုံသုံးပြီးပွဲစားနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။
အစစ်အမှန်ငွေနှင့်ကုန်သွယ်မှုမပြုမီသင့်၏အကောင့်ကိုဖွင့်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ၎င်းသည်စစ်မှန်သောငွေကြေးအကောင့်ထဲသို့စစ်မှန်သောရန်ပုံငွေများမထည့်သွင်းမီ Trader's Moon ၏လုပ်ဆောင်ပုံနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ပေါ်လစီပြန်အမ်း: အဆိုပါရောင်းချသူ 30 ရက်အတွင်းအပြည့်အဝပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်ပေးပါသည်။ အကယ်. ကုန်သည်၏လ Forex စက်ရုပ် 30 ရက်ကုန်ဆုံးချိန်အထိအမြတ်အစွန်းမရရှိလျှင်ရောင်းချသူသည်သင်၏ငွေကိုပြန်ပေးလိမ့်မည်။ သင်၏အကောင့်၏လက်ကျန်ငွေသည် 35% ထက်ကျော်လွန်ပါကသင်အကြံပြုထားသောချိန်ညှိချက်များကိုအသုံးပြုသောအခြေအနေတွင်ငွေပြန်အမ်းခြင်းစတင်လိမ့်မည်။
ကုန်သည်၏မွန်း EA မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 269 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
တရားဝင်ကုန်သည်၏ Moon EA ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ကြည့်ပါ
ကုန်စည်ဒိုင် Channel ကိုအညွှန်း
ကုန်သည်၏ Moon Forex စက်ရုပ်
ကုန်သည်၏လက EA - အသစ်စွမ်းအင်သုံး Forex METATRADER အတွက်4(MT4) စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအကြံပေးချက် - တိုးတက်မှုအခြေအနေ - + 4.3% လစဉ်ငွေ (ငွေအမှန်တကယ်ငွေစာရင်း!) ချစ်ခင်ရပါသော Forex ကုန်သည်၊ သတင်းများ! Trader's Moon EA ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - Metatrader4အတွက်အားကောင်းသည့် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်ကိုဤနေရာတွင်ပိုမိုသိရှိလိုပါကရယူနိုင်ပါသည်။ https://www.bestforexeas.com/traders-moon-ea-review/ Trader Moon EA သည်အလွန်အစွမ်းထက်။ အပြည့်အဝအလိုအလျောက် FX ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ အစပြုသူများနှင့်အကောင်းအဆိုးနှစ်ခုလုံးအတွက်အကြံပေး။ ဤ Forex Robot ကိုတီထွင်သူများသည်ဤကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ algorithm ကိုဖန်တီးရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ကြရသည်။ ယခုကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည်စျေးကွက်တွင်အလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြင့်မားစေရန်ရည်ရွယ်သည်... ဆက္ဖတ္ရန္